China The Okwu Mmalite nke Shock Sub Drilling Manufacturer na Supplier | Gaofeng
The ujo sub-egwu na-mepụtara na-anọrọ na malite ịgba eriri si axial deflections kere na bit site mkpọpu ala arụmọrụ na mgbe chebe bit si oké etinye na site egwu arụmọrụ. The ngwá ọrụ ga banye ujo ibu gburugburu malite ịgba eriri na malite ịgba bit. Ọ na-agụnye a arọ-oru imewe na style kpebisiri ike site a n'usoro nke ọrụ zutere, na ha nwere ike igwu na a ọnọdụ, n'agbanyeghị ma nro, na-ajụ ma ọ bụ ihe ịma aka guzobere.
Obi abụọ adịghị ya, ujo sub-egwu nwere n'uju ngwa. The ngwá ọrụ na-engineered aka bit penetration na ogologo bit ndụ n'otu oge dị ka ibelata malite ịgba olu akwa ike ọgwụgwụ, vibration na mmetụta ibu. N'ihi na EBIDO, o nwere ike na-agba ọsọ na bit ma ọ bụ n'ime malite ịgba olu akwa eriri dị ka na-atụ anya site n'ebe ahu. E wezụga, ọ nwere ike na-agba ọsọ igbe elu ma ọ bụ igbe ala dị ka nke a nwere ike ọ gaghị mmetụta n'ozuzu arụmọrụ si ngwá ọrụ. Gịnị bụ nnọọ ihe, niile esịtidem mmiri si na ngwá ọrụ na-lubricated na n'ime oge nke ọmụmụ na ọnwụ, na ngwá ọrụ o sina ọrụ n'ihi n'ibu spring usoro ga-arụ ọrụ site lubrication site mkpọpu ala ọmụmụ.
E nwere nza nke ụdị ujo sub mkpọpu ala, dị ka n'ibu haịdrọlik ujo sub, sere n'elu ujo sub, mkpọpu ala bompa sub, nakwa dị ka bompa sub oilfield.
The n'ibu haịdrọlik ujo sub bụ n'ezie a na-ọrụ ujo sub na-amịkọrọ na pulsate na ujo si malite ịgba ngwaọrụ site compressing mmiri na mmanụ ka ahịa na ike. Ọ bụ n'ezie tinye n'ọrụ n'ihi na ẹsụhọde vibrations triggered site aka guzobe-egwu na ịnọgide na-malite ịgba bit ike gburugburu ala, ka o na-enyere na-ebelata malite ịgba eriri njikọ ike ọgwụgwụ na ogologo malite ịgba eriri ndụ.
The-ese n'elu mmiri ujo sub bụ tinye n'ọrụ ọ bụla slanted na vetikal mkpọpu ala arụmọrụ iwelata vibration na-etinye na na malite ịgba eriri na malite ịgba rig ọcha. E nwere ihe abụọ dị ịrịba ọrụ. N'ihi na EBIDO, ọ na-enyekwu a na-egosi nke na-eke ma na-agbasa si threaded njikọ na-enweghị emebiri eri. The n'ezie bụ eziokwu na ọ prolongs amị na gia ndụ na rotary eduga drive.
Egwu bompa sub bụ n'ezie a dị mkpa drillstem mmewere maka deepwater mkpọpu ala arụmọrụ, kpọmkwem ebe drillstring oscillation bụ na-emekarị a ịma aka. Ngwá ọrụ a na-anapụta isii ft nke tụkwasịrị obi telescopic ije, na-enweghị etinye ọ bụla na-agaghị emeli na drillstring torque ikike, ike ọdụdọ, ma ọ bụ haịdrọlik ike.
The bompa sub oilfield bụ na-emekarị a nnọọ pụrụ ịdabere na ngwa ngwá ọrụ. Kwesịrị ekwesị n'ihi na onye ọ bụla azu arụmọrụ, ọ na-enye ike na-kpọmkwem ọgaranya na ndụ aka ike ala-onu ngwa. The oilfield azu ngwaọrụ style eme ka o kwe zuru torque na Inwe nkwuwa ọmụmụ mgbasa niile. Ịgachi ọrịa strok bụ 20 sentimita asatọ; ọzọ ọrịa strok ogologo dị mfe na-arịọ arịrịọ.
N'ihi ya, ndị a ujo sub-egwu na-ihe dị oké mkpa integral a akụkụ nke ụbọchị ọ bụla egwu. Ọ bụghị inweta ihe kasị mma na eri nkwụnye pụrụ ime ka ndụ ndị mmadụ nhụsianya. Ọzọkwa, ujo sub-egwu emeputa ọnọde a nnukwu yiri nkata nke juru ebe niile, na-adịghị na-ewu ewu nha iru ahịa 'ga-mkpa.
Post oge: Mar-27-2019
Bompa Sub Fishing Ngwá Ọrụ Na Drilling, Two-Way Shock Sub, Reverse Circulation Junk Basket, Fishing ite, Azu Tools, Ujo Sub Drilling Ngwá Ọrụ,